Ruushka: 14 heshiis la galey Sacuudiga oo ku kacaya lacag dhan 3 bilyan oo doollar – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ruushka: 14 heshiis la galey Sacuudiga oo ku kacaya lacag dhan 3...
Ruushka: 14 heshiis la galey Sacuudiga oo ku kacaya lacag dhan 3 bilyan oo doollar
Madaxa fulinta ee Sanduuqa Maalgashiga tooska ah ee Ruushka, Kirill Dimitriev, wuxuu xaqiijiyay in sanduuqani uu la saxeexanayo 14 heshiisyo oo cusub shirkado badan oo Sucuudiga ah, oo ay ku kacayaan heshiisyo kor u dhaafaya $ 3 bilyan.
Kirill Demetriev wuxuu yidhi “Heshiisyadeenu waxay noqon doonaan wax ka badan $ 3 bilyan hada hal shirkad ayaa ku takhasusi doona warshadaha saliida waxayna maalgashi ku samayn doonaan iskaashi lala sameeyo Aramco si loo soo saaro agab muhiim u ah shirkadaha Russia, Aramco iyo shirkado kale oo badan oo adduunka ah,” Kirill Demetriev ayaa u sheegay Al Arabiya.
Sarkaal Ruush ah ayaa tilmaamay in la sameeyo “qorshihii ugu dambeeyay ee maalgashiga iyada oo la adeegsanayo mid ka mid ah ninka ugu sareysa ee logistikada ee Russia waxaanan dooneynaa in aan maalgashi ku sameysanno meel aad u ballaaran oo ah heshiiska kirada diyaaradda.”
Wuxuu ka hadlay is afgarad ballaaran oo dhinaca beeraha ah, isaga oo ku sifeeyay go’aanka Sucuudiga ee lagu dhimayo xayiraadaha saaran dhoofinta qamadiga Ruushka oo ah tallaabo taariikhi ah.
Wuxuu muujiyay sida uu u rumeysan yahay inay jiraan fursado waa weyn oo dhanka beeraha ah oo u dhexeeya Ruushka iyo Boqortooyada, isagoo carrabka ku adkeeyay in heshiiska uu la galay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu waaweyn ee Sucuudiga ee dhanka beeraha uu xaqiijin doono xiriirka beeraha.
Previous articleRussia: 14 agreements with Saudi Arabia for 3 billion dollars
Next articleFaa’iidooyinka Basbaaska cas ee aadan ogeyn
Faah Faahin:-Qarax Gaari Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Ardeydo ku guuleysatey imtixaankii dab damiska oo hargeisa imid dhamaan gobalada